Ungayifumana njani iNtlawulo ye-YouTube yasimahla? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifumana njani iNtlawulo yePremiyamu yasimahla?
Meyi 9, 2021 0 IiCententarios 273
I-Tube yePremiyamu yinkonzo ehlawulelwayo kaGoogle, evumela abasebenzisi ukuba bafikelele kuwo wonke umxholo womculo kunye nokumamela Tube ngokungasikelwanga mda. Ngaphandle kwamathandabuzo, le nguqulo ifumene ukuthandwa kakhulu, yaba lukhuphiswano olomeleleyo kwezinye iinkonzo ze ukusasaza, phakathi kwazo Spotify o Apple Music.
Nangona kunjalo, abantu abaninzi bayazibuza ukuba banokufikelela njani kwi-You Tube Premium gratis, ngakumbi kuba uninzi lunomdla wokwazi iimpawu zale nkonzo intsha kwaye yeyiphi indlela abanokuthi bandise ngayo igalelo i-You Tube enikezela ngayo ukuze kufezekiswe imisebenzi enje, umzekelo: ukuthengisa ividiyo.
Iinyanga ezintathu zinokukhululeka
Abasebenzisi abanomdla wokufumana i-You Tube yeNkulumbuso simahla banokusebenzisa ikhadi labo lokuthenga ngetyala okanye ikhadi lebhanki kwaye iya kuba yinto ehlala ixesha elide kwaye kulula ukufikelela kuyo umxholo enikezelwa yile nguqulo intsha. Kuyimfuneko ukwazi ukuba kuyimfuneko kuphela ukubhalisela i-You Tube Premium okanye i-You Tube Music kwaye usebenzise ulwazi lwakho lwekhadi letyala okanye ledebhithi.
Ulwazi lokuhlawula kuphela kufuneka lubandakanywe, oko kukuthi, kuphela iinombolo zekhredithi okanye zekhadi ledebhithi. Ukuba wenza eli nyathelo, unokufumana iinyanga ezintathu simahla kwaye ngelo xesha ungayisebenzisa le nkonzo ngaphandle komda. Esi sisibonelelo esihle kwabo banemali encinci, kodwa bafuna ukwazi ukuba intsha njani le nto inguqulelo.
Kodwa kubalulekile ukukhumbuza abasebenzisi ukuba xa bengasebenzi ubhaliso ngaphambi kwenyanga yesithathu iphelile, uGoogle uya kuhlawulisa kwangoko inyanga yokuqala ukuthenga kwaye kubalulekile ukuba wazi ukuba izinga liya kwahluka ngokuxhomekeka kwilizwe ngalinye. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba ujonge uhlahlo-lwabiwo mali kwangaphambili, ngaphambi kokuqala ukusebenzisa i-You Tube Premium.
Izibonelelo zezicwangciso zosapho
Ngenxa yezibonelelo ezifunyenwe ziingcali ezininzi, abafundi, abasebenzi kunye noluntu ngokubanzi ngeTyhubhu yakho, yonke imihla inani labasebenzisi be maqonga You Tube Premium kunye You Tube Umculo. Kwaye uninzi lwaba bantu babelana ngemirhumo yabo nosapho, “ngesicwangciso sosapho”, esiluncedo oluxabisekileyo kubo bonke.
Ngexabiso eliphantsi kakhulu, "isicwangciso sosapho" sikulungele ukufikelela kwi-You Tube yeNyanga yasimahla, kodwa izinga liyahluka nakwilizwe ngalinye. Ngale nto iplani Ukufikelela kwiiakhawunti ezintandathu zinokunxulunyaniswa kwaye umnini uya kuba nakho ukukunika enye yazo, ngaphandle kokuba uhlawule nantoni na, ngaloo ndlela ukwazi ukungena kwindalo iphela yomculo kunye nesinema enikezelwa yi-You Tube Premium.
Intlawulo yasimahla kuwe Tube kunye neentengiso
Ungabhalisa kuYou Tube Music, apho uza kufumana umculo ongenasiphelo kunye nesimahla, oya kuhamba kunye nentengiso rhoqo kunye nokutshintshela ukujonga ezi ntengiso rhoqo unokusebenzisa i-You Tube Premium. Ngaphandle kwamathandabuzo, iqhinga zokumaketha ibaluleke kakhulu kwabo banomdla kule nto yedijithali kunye nezibonelelo zayo ezixabisekileyo kwishishini.
1 Iinyanga ezintathu zinokukhululeka
2 Izibonelelo zezicwangciso zosapho
3 Intlawulo yasimahla kuwe Tube kunye neentengiso
Ungawukhuphela njani umculo kwi-YouTube usb yasimahla?